Maitiro Akabatikana, ndiyo app yevhiki paApp Store | IPhone nhau
Nguva nenguva tinotarisira kuziviswa kweApple, umo inoshuma pamusoro pechikumbiro kana mutambo wakasarudzwa seApp yeVhiki, asi panguva ino yanga isiri iyo nyaya. Vakomana vanobva kuCupertino vakasarudza mutambo Wakabatikana Maumbirwo, kuti vaupe zvemahara kwevhiki rese, kusvika China chinotevera. Maitiro Akabatikana ane mutengo wenguva dzose we 2,99 euros. Ichi chishandiso chakaitirwa vadiki vemba, vari pakati pemakore maviri ne mashanu, sezvo ichivabatsira kuvandudza huchenjeri hwavo munzvimbo ine simba yedhijitari mukuwedzera mukusimudzira hunyanzvi hwavo hwekufunga.
NemaBusy Shapes, iwo madiki anovandudza kugona kwavo kubata zvinhu zvakapusa kuburikidza nhevedzano yezvirovedzo, mauri iwe unofanirwa kupenda maumbirwo munzvimbo dzakakodzera. Kana vana vadiki vaine chero mibvunzo, iko kushanda chete, ichavatungamira kuti vasarase kurudziro mumutambo. Izvo zvinhu pamwe nemesoji zvinoshanduka nguva nenguva kuitira kuti kufinhwa kusabata vana vasina kwavakarerekera uye vanoneta nechishandiso.
Iko kushanda kweBusy Shapes kwakagadzirirwa vadiki, kuitira kuti nekungotsvedza chigunwe chako pachiratidziro chemudziyo wedu, inogona kusangana nezvinhu nekukurumidza uye nyore. Sezvo vadiki vanofambira mberi mukugadziriswa kwezvikamu zvakasiyana, kuoma kunowedzera zvishoma nezvishoma, nekuda kweArtificial Intelligence yakabatanidzwa mukushandisa.
Maumbirwo Akabatikana anowanikwa mumitauro yakawanda izvo zvinogona zvakare kubatsira kuti vana vedu vatange kujairana nemimwe mitauro kuti zvishoma nezvishoma vakwanise kuwedzera mazwi avo. Uyu mutambo unoda zvirinani iOS 7 kana gare gare, inowirirana neiyo iPhone, iPad uye iPod Kubata uye inotora zvishoma zvishoma pane makumi mana MB pane yedu kifaa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Maitiro Akabatikana, ndiyo app yevhiki paApp Store
Roma: Yakazara Hondo - Bharabhari Invasion Inouya kuPad ​​munaKurume